Kedu ụzọ ị ga - esi mee nchọpụta ma soro isiokwu gị na Amazon?
Ịmepụta ngwaahịa gị nwere ike mezuo n'enweghị nchọpụta isiokwu zuru oke. Onye ọ bụla ahịa Amazon na-ere ahịa na-etinye oge dị ukwuu na mgbalị n'ime nchọpụta isiokwu. Usoro nchọta ahọpụtara nke oma nwere ike ime ka ugwo onu ahia gi ma meziwanye uzo gi na Amazon.
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala isiokwu dị ichiiche na ndepụta na nkọwa nke ngwaahịa Amazon. Ọtụtụ n'ime ndị ahịa na-agụnye ọ bụghị naanị isiokwu ha nwere na isiokwu ahụ, kamakwa nha, agba, ọnụahịa, na àgwà ndị ọzọ dị ịrịba ama nke nwere ike ịzụta ihe a. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọrọ na ndị ọrụ ahụ adịghị amasị ogologo oge ahụ, isiokwu ndị a na-atụnye isiokwu dị iche iche, Amazon na-eche dị iche iche, na-enye ọkwa kachasị elu nke peeji Amazon kachasị mma.
Ọ bụ ya mere na nhazi mbụ nke mgbasa ozi kachasị mma ịkwesịrị ịmepụta nyocha ọchụchọ iji chọpụta okwu ọchụchọ nke dị gị choro ịchọta ma jikọta ọdịiche dị na aha ngwaahịa, nkọwa, isi okwu, na-ajụkarị ajụjụ, URL, na ọbụna foto.
Ị nwere ike iji aka gị chọpụta data ndị a na-eji ụbọchị na ọbụna ọnwa na ya. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa oge gị ma nweta data ziri ezi, ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya iji zoo aka na ngwaọrụ search engine Amazon keywordtool.io ma ọ bụ Jungle Scout. N'isiokwu a, anyị ga-elebakwu anya na ngwaọrụ ndị a kachasị mma na-atụle otú ha ga-esi nyere gị aka ịchọta ihe ọmụma Amazon gị.
Ụzọ iji nweta mkpụrụ okwu dị na Amazon
bụ Keywordtool.io. Nke a na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa ahịa Amazon dịka ọ na-enye nkwụsị ọsọ na nke ziri ezi. Ọ bụ ebe ikpo okwu enyi na-arụ ọrụ iji nweta ndepụta nke aro ndị ị chọrọ ịbanye na ọchụchọ ọchụchọ. Ebe ị nwere ike nweta isiokwu ọchụchọ kpọmkwem maka Amazon yana maka ịbụ, YouTube, eBay, na ndị ọzọ na-elekọta mmadụ na e-azụmahịa n'elu nyiwe.
Keywordtool.io arụ ọrụ Amazon's AutoComplete iji chọpụta ihe ọ bụla metụtara isiokwu ọchụchọ ndị ị ga-atụle na ndepụta ngwaahịa gị.
Ọ bụ ihe ezi uche dị na iṅomi okwu ọchụchọ ndị a ka ịpunye n'ime Google Planner iji chọpụta nke kachasị mma maka gị. Ị nwere ike ịlele nyocha ọchụchọ maka okwu ọ bụla a tụrụ aro. Data a ga - enyere gị aka ịmepụta okporo ụzọ kachasị anya maka ndepụta gị.
Keywordtool.io bụ ihe ndị na-eme nnyocha na-enye aka na Google Resource Planner na ndị ọkachamara ọkachamara. Otú ọ dị, ngwá ọrụ nchọpụta ndị a adịghị enye gị ozi nke nke isiokwu ndị e mere nchọpụta na-emepụta ọtụtụ ahịa.
Jungle Scout nwere ike inye aka maka azụmahịa gị n'oge ya. Ngwaọrụ a nwere ike inye gị nyocha ngwa ngwa nke ire ere na ọnụahịa nke mkpụrụ okwu ọ bụla ahọpụtara. Ị nwere ike ịlele ahịa ahịa dị iche iche maka oge dị iche iche - afọ, ọnwa, izu, wdg. Na ihe ndị a nile anakọtara ị nwere ike ịga site na ọchụchọ gị iji bulie ha dabere na ego ha nwere. Ọzọkwa, ọ ga-enyere gị aka ịmata ụdị ụdị ngwaahịa gị nke nwere ike ịnwe ọkwa kachasị elu Source .